Wasiirka qorsheynta oo qurbo joogta ku booriyay inay ka qeyb qaataan horumarka dalka – Radio Muqdisho
Dahraan Muuse ayaa sheegtay in qalabkan uu yahay mid loogu adeegi doono bulsho Soomaaliyeed.
“Sidaad arkeysaanba kunteenarbaan hadda dekada ka soo bixinay saaka saan u adnay labo saac oo subax nimo ilaahbaa noo soo fududeeyay, waxaan rabnaa in aan Soomaaliya goboladeeda qaar gaarsiino qof walba oo Soomaali ahna dalkiisu waa u baahan yahay fadlan ka soo qayb qaata”ayay tiri Dahraan.
Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo ayaa uga mahad celiyay gabadhaan dadaalkeeda iyo sida ay isugu howshay in ay ka qayb qaadato taakuleynta ummadda Soomaaliyeed, isagoo balan qaaday in halkii ay ugu talo gashay la gaarsiin doono.
“Halkaan waxaa galabta taagan qalab caafimaad oo hay’adaan Dahraan wamen and Children ay ka keentay dalka Mareykanka looguna talo galay isbitaalada ku yaala gobolka Galgaduud iyo guud ahaan Galmudug, waxaan dhihi karnaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan”ayuu yiri Cirfo.
“Maanta waxaan halkaan iskugu nimid in aan ka qayb qaadano taageero aan u fidineyno gabar walaasheen ah oo dadkii qurbaha ka soo laabtay ah oo Dahraan Muuse la yiraahdo oo qalab caafimaad ka keentay dalka Mareykanka, runtii waa tallaabo ku dayasho mudan”ayuu yiri wasiir Ceynte .
Ururka Haweenka Naafada Soomaaliyeed oo codsaday in la caawiyo naafada